Facebook မှာ Post တင်မှတော်လှန်းရေးလို့ထင်နေရင် ငါကိုလည်း Boycott စာရင်းသာထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ၊ ရဲရင့်အောင် – MC Tv Club
” ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ခဲ့ရတယ် အခုဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေနေရတယ်ဆိုတာတွေကို အကုန်ထုတ်ပြောပြပြီး ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးပြမှ ၊ နေ့စဉ်ဖြစ်သမျှ သတင်းတွေကို အများနဲ့တန်းတူ နားစွင့်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ ၊ သူများလာပြောပြမှ သိရတဲ့ အခြေအနေမျိုးထဲ နေ့တိုင်း Facebook မှာpost တွေ တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ငါ့လည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက်ပါတော့ကွာ ဆုံးရှုံးစရာလည်း ကုန်သွားပါပြီ။ ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ငါပဲသိတယ်။ February (၁) ရက်နေ့မနက် (၆) နာရီကစပြီး ငါလုပ်သမျှအရာတွေက မင်းတို့သဘောကျဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပါ အားတဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေအောက်မှာ အာလာချောင်တာတွေ ရပ်ပါတော့ ငါတို့လုပ်စရာရှိတာတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့ မရဘူးလား? ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article Boycott တကယ်အောင်မြင်လာပြီလား?
Next Article ကျောင်းမပိတ်ဘဲ Maskတပ်ပြီးစာသင်ကြဖို့ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကြောင်းစစ်ကောင်စီပြော